Zọ iri abụọ ị ga-eji nweta afọ ojuju afọ gị karịa asọmpi gị Martech Zone
Ọ na-eju m anya ole ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike na-etinye n'ime atụmatụ ọdịnaya na-enweghị ele saịtị na ibe asọmpi anya. Anaghị m pụtara asọmpi azụmahịa, M pụtara organic asọmpi asọmpi. Tinye n'ọrụ ngwá ọrụ dị kaSemrush, ụlọ ọrụ nwere ike ịme nyocha asọmpi n'etiti saịtị ha na saịtị asọmpi iji mata ihe okwu na-eme ka ndị na-asọ mpi ga-eduga na saịtị ha.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime gị nwere ike ịnọ na-eche njikọ azụ kwesịrị ịbụ atụmatụ ahụ, agaghị m ekwenye. Ọ bụ ezie na njikọta azụ nwere ike ibute ọkwa dị elu maka obere oge, nsogbu bụ na ọdịnaya ka mma ga-emeri mgbe niile n'ikpeazụ. Ebumnuche gị kwesịrị ịbụ ịmepụta ọdịnaya dị mma karịa nke saịtị bipụtara bipụtara. Mgbe ị rụrụ ọrụ ka mma karịa ka ha rụrụ, ị ga-arụ ya irite njikọ karie ihe ị ga - ejigharị aka.
Ross Hudgens nke Siege Media nwere nkọwa zuru ezu na otu esi eme ka onu ogugu weebụsaịtị site na nleta 250,000 + kwa ọnwa nwere infographic otu esi ahazi ọdịnaya ka mma. Onwe m, Achọghị m ịma maka ịnweta ọtụtụ ndị nleta na saịtị ahụ dịka m na-eche banyere ndị ọbịa mara mma nke ga-edebanye aha, laghachi, ma gbanwee. Mana infographic bụ onyinye ọla edo maka na ọ na - akọwapụta etu esi edozi ogo ọdịnaya gị nke ọma. Nke a bụ atụmatụ anyị na-etinye oge niile na atụmatụ ọdịnaya anyị na ndị ahịa.
Otu esi edozi ogo nke di nma
Zipu Post - dezie post gị slug ma mee ka URL gị dị mkpụmkpụ. Rịba ama otú URL a si bụrụ ngalaba anyị na mgbakwunye ka-esi-n’usoro-n’iru-ime-nma, URL dị mfe, echefu echefu na ndị ọrụ njin ọchụchọ ga-adịkwu mfe ịpị na ọbụna ịkekọrịta.
Tydị Ọdịnaya - ọdịyo, eserese, ihe eserese, mmekọrịta mmekọrịta, vidiyo… ihe ọ bụla ị nwere ike ime nke na-eme ka ọdịnaya gị pụta ìhè ma nwee ike ịkekọrịta ya ga-enwetakwu nlebara anya. Ọ bụ ihe mere anyị ji hụ n'anya ma zụlite micro-ndịna sized maka mmadụ mgbasa ozi.
Peeji Mbụ - Iji isiokwu dị mkpa, mana imepụta aha kwesiri ịpị bụ atụmatụ dị ukwuu. Anyị na-ebipụta aha peeji nke dị iche karịa aha isiokwu, nke kachasị nke ọma maka ọchụchọ. Biko egbula ndị ọrụ ọchụchọ jiri utu aha na-adịghị mkpa. Ga-atụfu ntụkwasị obi gị na ndị ọbịa.
Mfe ederede - Anyị na - ezere nkọwa okwu dị mgbagwoju anya na mkpụmkpụ ụlọ ọrụ dịka o kwere mee - belụsọ na anyị gụnyere nkọwa na nkọwa banyere ha iji nyere ndị ọbịa anyị aka. Anyị anaghị anwa iji ihe anyị nwere nweta akara ugo mmụta, anyị na-agba mbọ ime ka isiokwu dị mgbagwoju anya nwee nghọta. Ikwu okwu n’ogo onye obula obula nwere ike ighota di nkpa.
Nhazi Peeji - Ọdịnaya họọrọ nke mbụ nwere nchịkọta ndepụta 78% nke oge. Hazi ibe gị ka ọ bụrụ akụkụ dị mfe nghọta na-eme ka ndị na-agụ ya ghọta ya mfe. Ndị na - agụ ya hụrụ ndepụta ha n'anya n'ihi na ha na - eme nyocha ma nwee ike icheta ma ọ bụ lelee ihe ha chọrọ ma ọ bụ leghara anya.
Akwukwo Akwukwo - justgbanwe ụdị edemede gị na ngwaọrụ dị mkpa ụbọchị ndị a. Mkpebi ihuenyo na-eme okpukpu abụọ kwa afọ ole na ole, yabụ mkpụrụ edemede na-adịwanye obere. Anya ndị na-agụ akwụkwọ agwula, ya mere were ya nwayọ na ha ma debe mkpụrụ edemede gị ka ọ buru ibu. Onu ogugu font maka ogo Page # 1 bu 15.8px
Oge Ibu Ibu Ngwa - Onweghị ihe na-egbu ọdịnaya gị dị ka nwayọ nwayọ. Enwere ton nke ihe ndị na-emetụta ọsọ ọsọ peeji gị, ị ga na-agbasi mbọ ike maka oge ibu ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Visuals - Nhazi ọkwa nke mbụ nwere foto 9 n'ime ibe ya gụnyere ihe onyonyo, eserese, na eserese ndị na-ekwenye ekwenye ma nwee ike ịkekọrịta dị oke egwu.
Photos - ijide otu foto foto dị ka otu puku saịtị ndị ọzọ anaghị enyere gị aka ịmepụta ozi pụrụ iche. Mgbe anyị nwetara onye na-ese foto anyị ka anyị na ndị ụlọ ọrụ anyị na-arụkọ ọrụ gbaa, anyị ga-ewekwa otu narị ma ọ bụ gosi gbaa gbaa gburugburu ọrụ na ụlọ. Anyị chọrọ foto ndị na-adọrọ adọrọ nke na-amata ọdịiche dị n'etiti onye ahịa na ndị asọmpi ha. Ihe oyiyi dị elu na-enweta 121% ọzọ mbak
Bipute bọtịnụ Share - imepụta oke ọdịnaya ezughị ma ọ bụrụ na ị naghị eme ka ọ dị mfe nkesa ọdịnaya ahụ. Anyị na-eme ka ọ dị mfe site na bọtịnụ ahaziri aka ekpe, na mbido, na ngwụcha nke ọdịnaya ọ bụla. Ma ọ na-arụ ọrụ!
Infographics - Nnukwu ihuenyo na-achọ ọmarịcha, nnukwu onyonyo ma ọ bụ ihe ịchọ mma na-atọ ụtọ. Anyị anaghị ewepụta ihe ọmụma sara mbara n'ihi na o siri ike ịkekọrịta na saịtị ndị ọzọ. Promịpụta ihe ọmụma dị ịtụnanya ndị dị ogologo ma na-ahụ anya nke ukwuu na-enyere anyị aka ịdọta, kọwaa, ma gbanwee ọtụtụ ndị ọbịa.
Links - Ọtụtụ mbipụta na-ezere njikọ ndị na-apụ apụ na-akwụ ụgwọ niile ma ekwenyere m na nke ahụ bụ mmeghe. Nke mbụ, ịnye njikọ maka ọdịnaya bara uru nke ndị na-ege gị ntị chọrọ ga-abawanye uru gị dị ka onye na-elekọta gị na ọkachamara ha. Ọ na-egosi na ị na-a attentiona ntị ma nwee ekele maka nnukwu ọdịnaya. Nke abuo, site na algorithms emelitere na nyocha, anyi ahubeghi ikike anyi nwere otutu uzo esi abanye.
Ogologo Ọdịnaya - Anyi na-aga n'ihu ịmanye ndị ode akwụkwọ anyị ka ha nweta nkọwa nkọwa mara nke ọma banyere isiokwu. Anyị nwere ike ịmalite site na isi ihe mpempe akwụkwọ maka onye na - agụ ya ka ọ wee nyochaa ma jiri mpempe akwụkwọ kewaa peeji ahụ na ngalaba. Anyị na-efesa ike na mesie ike Kpido ojiji n'ime oge niile iji jide uche ndị na-agụ ya.
Kekọrịta ndi mmadu - Anyị anaghị ekekọrịta ọdịnaya anyị otu oge, anyị na-ekekọrịta ọdịnaya anyị ọtụtụ oge gafee ọwa mmekọrịta anyị. Social media dị ka akọrọ ebe ndị mmadụ na-achọpụtakarị na ezigbo oge. Ọ bụrụ n’ị bipụtara edemede n’azụ oge onye na-eso ụzọ na-ege ntị, tufuru ha.
Mee ọdịnaya gị - Akụkụ dị mkpa nke ndị na-ege anyị ntị bụ ndị na-anaghị agakarị saịtị anyị - mana ha na-agụ akwụkwọ akụkọ anyị ma ọ bụ zaghachi ọkwa nke akụkọ ndị masịrị ha. Enweghị akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na-akpali ọdịnaya anyị na ndị na-ege ntị dị mkpa, anyị agaghị ekenye oke. Ọ bụrụ na anaghị ekekọrịta anyị, anyị anaghị eso ya. Ọ bụrụ na anyị anaghị enweta njikọ, anyị agaghị aga n'ọkwa.
Otu esi ahazi ọdịnaya Ọbụna nke ka mma
Anyị hụrụ ndepụta a n'anya, mana ịchọrọ ịkekọrịta ihe ole na ole eleghara anya ma dị oke egwu:
Author - Tinye onye edemede gị bio na ibe gị. Ka ndị na-agụ akwụkwọ na-achọgharị ma na-ekerịta ha, ha chọrọ ịmata na onye nwere aka ọrụ dere edemede ahụ. Achọpụtaghị ọdịnaya enweghị akwụkwọ dịka nke nwere onye ode akwụkwọ, foto, na bio nke na-enye ihe kpatara eji ege ha ntị.
Formdị ekwentị - Ọ bụrụ na ibe gị anaghị adị mfe ọgụgụ, dịka ọ ga-adị na usoro Google's Accelerated Mobile Page (AMP), ikekwe ị gaghị enwe ọkwá na nyocha ekwentị. Na nyocha ekwentị na-arịwanye elu.
Nnyocha Nke Isi - Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere data ụlọ ọrụ nke nwere ike ịba uru na atụmanya gị, gwuo ya ma nye nyocha ihu ọha. Primary nnyocha bụ goldmine na-akọrọ mgbe niile online. Bịara n'ezi oge, data eziokwu dị na mkpa dị ukwuu site akwụkwọ mbipụta, influencers, na ọbụna gị asọmpi.
Nnyocha nke Secondary Curated - lee anya na ala nke ihe omuma a ma ị gha achoputa na ha mere nyocha ha - ichota uzo iri na abuo nke nchoputa mbu nke gosiputara ihe doro anya nke ihe ndi choro. Mgbe ụfọdụ naanị ịhazi na ịdọpụta ọla edo na-enye ozi niile atụmanya gị na-achọ.
Lezienụ maka Nkwalite - kwalite ụgwọ nkwalite, kwalite nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe, mmekọrịta ọha na eze, mgbasa ozi nke obodo… ndị a bụ ihe siri ike, ezubere iche, itinye ego ụbọchị ndị a. Ọ bụrụ n ’ọ bụrụ na ị na - agabiga nsogbu nke imepụta ọdịnaya dị ukwuu - ị ga - akacha mma ịnwe ego iji kwalite ya!
Tags: ogologo ọdịnayaụdị ụdaoyiyiejikọInfographics Ahịanyocha ọchụchọnhazi ọchụchọoutbound njikọaha peejiphotosslugn'usoroAaha ahashare bọtịnụurl
N'ezie, Nnukwu Post. Akwụkwọ ozi na-amasị m otu anyị kwesịrị isi mepụta UI maka Ngwaahịa.
Lacy Clagg kwuru
Hụ isiokwu a n'anya Dougie! ezigbo mkpa 🙂
Mee 4, 2016 na 4: 04 PM
Maka ọtụtụ akụkụ bụ isi, mana ama dị oke mkpa. Daalụ maka ichetara anyị ihe dị oke mkpa.
Otu agbakwunye bụ icheta iji mee ka akụkọ gị nwee mmetụta uche. Cheta onye ahia gi bu ma dozie nsogbu ha site na iji mmetuta obi.
Mee 4, 2016 na 9: 13 PM
Nnukwu nzaghachi mụ na Annie kwenyere kpamkpam! Itinye aka na mmetụta uche bụ ụzọ dị ike isi kpalie onye na - agụ ya.